फेसबुकले क्याम्ब्रिज एनालिटिका स्कण्डलमा चार पटक मुद्दा दायर गर्‍यो ग्याजेट समाचार
फेसबुक र क्याम्ब्रिज एनालिटिका कांड मात्र शुरू भएको छ। सामाजिक नेटवर्क एक हप्ताको लागि विवादको केन्द्रमा रहेको छ। तर यस्तो देखिन्छ कि यसको लागि परिणामहरू भर्खर शुरू भएको छ। हजारौं प्रयोगकर्ताहरू बाहेक जो सामाजिक नेटवर्क छोड्दैछन्, अब तिनीहरू चारवटा मुद्दा हाल्ने छन्.
कम्पनीलाई यस हप्ता जम्मा चार पटक मुद्दा हालेको छ। यो उत्तरी क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतहरूमा भएको छ। फेसबुक विरूद्ध मुद्दा मुद्दा क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका साथ डेटा आदानप्रदानको लागि बनाइएको हो।
मुद्दा हाल्ने पहिलो व्यक्ति सामाजिक नेटवर्कको दुई शेयरधारकहरू नै छन्। फ्यान युआन र रोबर्ट केसीले फेसबुकको बिरूद्ध क्लास एक्शन मुद्दा हालेको छ, प्रत्येक आफ्नै। कम्पनीको बिरूद्ध, सीईओ मार्क जकरबर्ग र CFO डेभिड वेनरको बिरूद्ध। ती दुबै कुर्छन् तिनीहरूले भोगेका घाटाहरू फिर्ता लिनुहोस् यस हप्ता कम्पनीको शेयर बजार क्र्यास पछि।
यद्यपि तिनीहरू केवल सामाजिक नेटवर्कमा मुद्दा दायर गरेका छैनन्। सामाजिक नेटवर्क को पहिलो उपयोगकर्ता सामाजिक नेटवर्क विरुद्ध कारबाही गर्न पहिले देखि नै वास्तविक छ। यो Laरेन प्राइसको बारेमा हो, जसले मार्च २१ मा मुद्दा दायर गर्यो। यसले behalf० करोड प्रयोगकर्ताहरूको तर्फबाट पनि गर्छ जसको डेटा सम्झौता गरिएको छ। एउटा कारण यो हो कि तपाईले आफ्नो फेसबुक च्यानलमा नोभेम्बर २०१ in मा धेरै राजनीतिक विज्ञापनहरू देख्नुभयो।
सामाजिक नेटवर्क बिरूद्ध चौथो मुद्दा बिहीबार पेश गरिएको थियो। यस मामलामा यो वकिल जर्मिया एफ। होलिसी द्वारा पेश गरिएको थियो। वकिलले कम्पनीको सेयरहोल्डरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। उसको मुद्दा कम्पनी, सीईओ र निर्देशकहरूको बोर्डको बिरूद्ध छ। किनभने तिनीहरू विचार गर्छन् कि यो डाटा उल्ल prevent्घन नगरी तिनीहरू सबैले आफ्नो कर्तव्य भंग गरे.
एक शक बिना, फेसबुक सबैभन्दा राम्रो क्षणको माध्यमबाट गुज्रिरहेको छैन। थप रूपमा, अब तिनीहरूसँग न केवल शेयर बजार वा सामाजिक नेटवर्क छोड्ने हजारौं प्रयोगकर्ताहरूसँग समस्या छ। तिनीहरू पनि हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्छन् अदालतमा एक धेरै घटना वर्ष यदि यी मागहरु अगाडि बढ्छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » क्याम्ब्रिज एनालिटिका कांडमा फेसबुकले चारवटा मुद्दा दायर गर्यो
कान फिल्म फेस्टिवलले स्ट्रिमि services सेवाहरूबाट फिल्मको सहभागितालाई वीटो गर्दछ